Imisa ka badan 4-DHEA ayaa loo beddelaa testosterone? | AASraw
/blog/4-DHEA , Gallery/Sidee Muun 4-DHEA U Noqon Doonaa Testosterone?
Posted on 06 / 30 / 2018 by Dr. Patrick Young ku qoray 4-DHEA, Gallery. Waxay leedahay 0 Comment.
Wax kasta oo ku saabsan 4-DHEA
1.Waa maxay 4-DHEA
2.How 4-DHEA Shaqo
4.Waa maxay faa'iidooyinka 4-DHEA?
5. Miyuu 4-DHEA yahay Steroids Anabolic?
6.How si aad u isticmaasho 4-DHEA?
7. Sidee looga hortagaa dhibaatooyinka dhinaca 4-DHEA
8.How badan oo 4-DHEA ayaa loo beddelaa testosterone
9.Waa maxay faraqa u dhaxeeya DHEA iyo 4-DHEA
10.Top 5 Prohormones Caan ah
I.4-DHEA budada Calaamadaha aasaasiga ah:
Nooca Molecular: C19H28O2
1. Waa maxay 4-DHEA?
4-DHEA budada, CAS 571-44-8, oo sidoo kale loo yaqaan 4-androstene-3b-ol, 17-one, 3β-Hydroxy-4-androsten-17-one, 3β-hydroxyandrost-4-en-17-one, 3β-hydroxy -D4-androsten-17-mid, 3β-hydroxyandrost-4-en-17-mid, 3β-hydroxy-etioallochan-4-en-17-one. 4-Dehydroepiandrosterone (4-DHEA) waa steroid oo ah isomer of 5-dehydroepiandrosterone.
4-DHEA budow waa mid dabiici ah oo aan caadi ahayn (non-methylated non-methylated (17AA) PRO-steroid. Inkasta oo 4-DHEA ay aromatize u noqon karto estrogen waxaa laga yaabaa in aysan ku filneyn in ay keento saameyno dheeraadka ah ee estrogen. Natiijooyinka guud waxay la mid noqon doonaan ama asalka dhabta ah ee 4-AD wuxuu mamnuucay 2004. Qiyaaso badan oo ka mid ah xaruntan ayaa soo saari doona guulo cufan oo cufnaanta ah ee muruqa, oo leh horumarin dhexdhexaad ah oo xoog leh. Qalabkan waxaa laga yaabaa inuu soo saaro qaar ka mid ah isbeddelka estrogen, taas oo laga horjoogsan karo maamulida aromatase inhibitor, laakiin taasi badi waxay ku guuldareysataa ujeedada isticmaalka dhismahan si uu u bilaabo.
magaca 4-DHEA, 4-Andro, 4-AD
Color Caddaan cad ama midab cad oo budada ah
Delivery Time gudaha saacadaha 12 ka dib bixinta
Qaabka mushaar-bixinta WU, MG, BT, TT
Description 4-DHEA waa mid dabiici ah oo aan caadi ahayn (non-methylated non-mNXXX) pro-steroid. 17-DHEA, sida DHEA, waxay u baahan tahay habka isbedelka 4 ee ku lug leh 2b-HSD iyo 3b-HSD si loogu badalo Androstenedione / androstenediol, ka dibna testosterone. Maxaa ka dhigaya 17-DHEA waxoogaa ka duwan DHEA waa dammaanad labadii xero 4th halkii ay 4th. Taasi waxay ka dhigeysaa 5-DHEA in ay yar tahay estrogenic iyada oo aan si toos ah u dhaqmeynin qiyaasta daawada estrogen sida DHEA ayaa la ogaaday.
Maaddaama uu dhismahan dabiiciga ah yahay iyo guud ahaan guud ahaan aan-methylated wax saameyn fudud noqon doonaa mid fudud. Si kastaba ha noqotee, qiyaasta sare waxay sidoo kale keeni kartaa maqaar madow, finanka iyo cadaadiska dhiigga oo kor u kaca. Sababtoo ah steroidkani waa non-17AA waa in ay jirto walaac yar oo ku saabsan inuu si xun u saameynayo saamiga HDL / LDL. Sababtoo ah dhismahani wuxuu u beddeli karaa testosterone waxa kale oo uu u beddeli karaa DHT iyo shaybaarka kale ee 5A-yar. Tani waxay u adeegsankartaa inay noqoto mid wanaagsan oo leh xeryaha aan caadiga aheyn ama kuwa aan caadiga aheyn kuwaas oo abuuri kara dhibaatooyin la xiriira libido ama gyno sababtoo ah maqnaanshaha iyo quwadda korontada.
2. Sidee 4-DHEA Shaqeeyaa?
Ka dib markii la wada baabi'iyo, 4-DHEA (4-Andro) wuxuu galayaa dhiiggaaga wuxuuna u beddelaa tijaabo. Xaruntu waxay bilaabi doontaa in ay yeeshaan dabeecad aad u sarreeya oo ah anabolic, taas oo keeneysa in cabbirka iyo xoogga ay kor u qaadaan iyada oo kor loo qaadayo jarijigaaga galmada - oo ku siinaya in la yaab leh "Alpha Male Ecstasy."
Waa maxay Prohormone?Prohormones waa xal macquul ah oo loogu talagalay natiijooyinka ugu badan ee hoormoonka. Prohormones waa xeryaha loo qaato hadal ahaan. Prohormone macnaheedu waa ficilku wuxuu noqon karaa hormoon Isaga keligood, iyagu ma shaqeynayaan. Shaqadooda waa inay wareegto dhiigga. Marka hormoonka loo bedelo hormoon, wuxuu xakameynayaa heerarka hoormoonka. Ka feker habka hormoonka ah ee ah protein-protein oo u bedelaya borotiinka si kor loogu qaado waxqabadka isboortiga iyo caafimaadka muruqa.
4-DHEA waa tallaal, iyo in ay cadahay, 4-DHEA ma aha mid hormarsan sababtoo ah waxay u baahan tahay laba isbarbardhig si loo maro Testosterone. Sidaas, ka fikir 4-DHEA sida badan oo ka mid ah "pro-pro-hormone".
4-DHEA (4-Andro), waa habdhaqameed u saamaxaya dadka isticmaala inay ka faa'iideystaan ​​DHEA iyadoon waxyeellooyinka xun ee ka iman karay estrogenic. 4-DHEA waa dabeecad dhedhexaad ah DHEA. DHEA, ama dehydroepiandrosterone, waa hoormoon soo saaray qanjirrada adrenal.
Qanjirrada adrenal waa qanjir ku jira kore ee kelyaha. Waa wax soo saarka ugu weyn ee hormoonnada jirka ee ku jira jirkaada oo gacan ka geysta hagaajinta hormoonada jinsiga iyo cortisol. Waxaad u baahan tahay hormoonnadaas caafimaadkooda iyo badbaado wanaagsan. Mid ka mid ah hormoonada ugu muhiimsan ee soo saaro qanjidhada adrenal waa adrenaline. Dareenkaaga ama colaadahaaga xaaladaha walaaca ah waxay ka yimaadaan hoormoonnada muhiimka ah ee kelyahaaga.
Hoormoonka DHEA ee soo saarey qanjidhada adrenal, laakiin maskaxdu waxay ka dhigtaa mid sidoo kale. DHEA waxay u ogolaataa soo saarida f androgens iyo estrogen, taas oo ah faa'idada ay rabto inta badan kuwa doonaya in ay kordhiyaan xajmiga muruqyada iyo murqaha. Marka jirku jiraa, DHEA wax soo saarka jirka ayaa yaraynaysa. Yaraynta DHEA ee jirka ku jirta waxay keenaysaa jirrooyin hormoon, hoos u dhac ku yimaada jinsiga, iyo osteoporosis.
4-DHEA waa habdhaqameed kaas oo damacsan in waxqabadyada caafimaadka leh iyo quudinta oo ay dib u soo celiyaan heerarka DHEA ee jirka. Waxay wali socotaa ilaa inta geedi socodka ay bilaabantay waqtiga saxda ah.
4. Waa maxay faa'iidooyinka 4-DHEA?
Intaa waxaa dheer, Gargaarka 4-DHEA waxaad filan kartaa inaad natiijooyinkaas leedahay:
- Awooda iyo xooggaba
- Gooyo goynta
- Waqtiga soo kabashada
Waqtiga nafaqada ee habboon, waxaad ku ogaaneysaa inaad ka soo kabsaneyso habka jimicsiga si dhakhso ah markaa waxaad sameysatay markaad wareegto.
Waxaad ogaan doontaa ereyada xooggan iyo orgasmado xoogan. Waxa kale oo aad ogaan doontaa in aad sariirtaada ku badan tahay.
-Mon-methylated, sidaa daraadeed beerkaaga waa ka badbaaday
Dabcan, labada sare ee 4-DHEA (571-44-8) faa'iidooyinka kor u kaca iyo koritaanka muruqa. Kuwani waa waxa aad raadineyso inaad abuurto muuqaal farsamo ah. Deeqda seddexaad ee ugu wanaagsan ee 4-DHEA waxay kaa caawineysaa dib u soo kabashada, sababtoo ah markaa waxaad sii wadi kartaa tababarka marar badan isla markaana sii kordhiso dhaqso.
5. Miyuu 4-DHEA ku yahay midabka Anabolic?
Farsamo ahaan, haa. Laakiin farqiga u dhexeeya steroids joogtada ah iyo 4-andro waxay ka dhigtaa sharci sharciga Mareykanka. Sababta oo ah 4-DHEA, magaca kale ee 4-iyoro, wuxuu leeyahay kala duwanaansho in jidhkeennu si dabiici ah u abuuro.
DHEA waxay u taagan tahay - iskuday oo u dhawaaq kan midkan - dehydroepiandrosterone, oo ah mid ka mid ah steroids ugu badnaa ee lagu sameeyay jirka bini'aadamka.
Iyadoo loo marayo habka isbedelka enzim, 4-iyoro dheellitiraadku waxay noqdaan steroids dhaqameed oo hore u mariyey beerka.
Kadibna wuxuu galayaa dhiigga sida testosterone buuxa, kaas oo jirkaagu u isticmaalo sida testosterone dabiiciga ah. Hase yeeshee ma burburin beerkaaga, taas oo ka dhigeysa mid dheeri ah.
6. Sidee loo isticmaalaa 4-DHEA?
Kuwa bilowga ah, waa inaad qadataa 4-DHEA (4-DHEA qiyaasta) toddobaadyada 4-6, inta u dhaxaysa 300-500 mg maalin kasta.
Dhexdhexaadiyeyaasha dhexe ama kuwa sare ama kuwa korreeya, waxaad aadi kartaa toddobaadka 6-8 oo waxaad raacdaa 300-750 mg 4-DHEA qiyaasta maalintii.
Kuwani waa in la raacaa si adag, sababtoo ah 4-andro waa habdhaqan aan loo baahnayn. Iska hubi inaad ku adkaato nidaam adag, oo ay ku jiraan wakhtiga iyo baaskiilka.
Waqtigaas gudaheeda, waa inaad filaneysid inaad hesho xaddiga 8-10 ee koritaanka muruqa.
Habka ugu fiican waa in la kala qaado qiyaastaada maalinlaha ah, qayb ka mid ah AM iyo mid kale oo ka mid ah PM.
Ama, natiijooyinka ugu fiicnaanta, qaadashada kala badh taageeradaada saacad ka hor shaqadaada iyo midda sariirta ka hor. Tani waxay xaqiijinaysaa kobaca murqaha ugu badan, kor u kaca, iyo soo kabashada.
7. Sidee looga hortagi karaa 4-DHEA?
4-DHEA (4-Andro) wax yar ma leh wax saameyn ah / 4-DHEA waxyeelo soo gaartay. Waxaa laga yaabaa inaad la kulanto qaab beddelid qalliin oo yar, qanjirada murqaha, cadaadiska dhiigga sareeya, gardarrada iyo xaaladaha qaarkood ginecomastia (gyno).
8. Imisa ka badan 4-DHEA ayaa loo beddelaa testosterone?
Tani waa su'aal cajiib ah in qof waliba doonayo inuu ogaado. Laakiin nasiib darro, jawaabtu waa "waxay ku xidhan tahay" oo macnaheedu yahay inay dhab ahaantii ku xiran tahay qofka. Haddii ay hayso heerarka sareeya ee aromatase markaa waxaa laga yaabaa inaad hesho estradiol qaar ka mid ah. Haddii ay jiraan waxyaabo badan oo ka mid ah unugyada HSD, waxaad ku dhici kartaa barar aad u weyn oo ah testosterone. Waxay dhab ahaantii ku xiran tahay shakhsiga, laakiin daraasadaha qaarkood waxay muujiyeen in 30% ay isbedel ku sameeyeen taranka - taas oo ah mid muhiim ah.
Maadaama ay ku badaleyso xeryahooda badan ee jirka, habka ugu wanaagsan ee loo isticmaalo 4-DHEA (571-44-8) waa sida yar yar ee wareeggaaga. 4-DHEA waa inaysan noqonin midda ugu muhiimsan ee ku jirta xargahaada. Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo hababka kale ee loo yaqaan '1-DHEA' ee 2: 1 ama 3: Xaddiga 1 (iyadoo ku xiran nooca jirkaaga - ectomorphs waa in aad isticmaasho 2: 1, halka endomorphs waa inay isticmaasho 3: 1).
9. Maxay kala duwan yihiin inta u dhaxeysa DHEA iyo 4-DHEA
Maxay kala duwan yihiin inta u dhaxeysa DHEA iyo 4-DHEA
magaca DHEA 4-DHEA
Waxtarka ugu weyn -Anniga-gabowga (tamarta dhallinyarada ah)
-Howlaha isdabajooga (caanqabatoolka lidka ku ah)
Nidaamka Iimaan -Kooxda maskaxda (xajinta nitrogen)
Mugga codka (hematopoietic)
Dheef-shiid kiimikaadka hoose 5-iyorostenediol (5-AD) 4-iyorostenediol (4-AD)
Description DHEA waxaa loo tixgeliyaa "guud" ama DHEA joogto ah. Waxaa farsamo ahaan loogu yeeri karaa 5-DHEA, maaddaama dammaanad labaduba ay ku yaalaan booska 5th.
DHEA waxay ku caan baxday dad badan oo sii kordhaya tan iyo 1980. Waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa awoodda ay ku taageereyso tamarta iyo ladnaanta guud ee qiyaasta 50-100mg / maalin. (1-3) Dhawaan dhaw, qiyaaso badan oo DHEA ah ayaa loo isticmaalay in lagu hagaajiyo jirdhiska jirka sababtoo ah saameynaha anabolic iyo anemolinka ee DHEA ee fudud. (1, 4) Tani waxay ka dhigeysaa DHEA xulasho wanaagsan oo lagu goynayo inta lagu jiro cunto kalooriye yari, maxaa yeelay DHEA waxay leedahay qalabka murqaha leh. (1, 17)
DHEA waxay u badashaa testosterone xaddiga ku saabsan 1%, si kastaba ha ahaatee waxay leedahay beddel weyn oo loogu talagalay 5-androstenediol, halkaas oo ay ku yeelato saameyn xun oo istrogen iyo anabolic. (5-8) Qalabka thermogenic DHEA wuxuu ka yimaadaa isugeyntiisa ilaa 7-oxo-DHEA. (4)
Sababtoo ah saameynaha isdifaaca ee 'DHEA' ee ay ku dhacdo waxaa dhif ah soo saaraa timo lumis ama finan. Inkastoo DHEA ay leedahay saameyno qiyaasta ah ee estrogenic, waxay dhif u tahay dhalin-yarada qanjidhada ama ginro ama waxyeelo aan loo baahnayn. (1-3) Qaar ka mid ah dadka isticmaala dhibbanayaasha waxay soo sheegaan walaac ama hurdo la'aan DHEA, taas oo la xiriirta waxqabadka neurostero ee maskaxda. (3) Si kastaba ha ahaatee, saameyntani waxaa kale oo lagu soo warramaa "tamar dhiirigalin ah" kaas oo ah faa'iido badan oo laga helo DHEA.
Sababtoo ah dheefyada ballaaran ee DHEA iyo hannaanka hormoonka ah ee loo dheellitiray si fudud ayaa loo isticmaali karaa goynta, ama in ay hayso faa'iidooyinka inta lagu jiro wareegga dhismaha ee wareega dhismaha. 4-DHEA waa dabeecad dhedhexaad ah DHEA. Qaab dhismeedka wuxuu u eg yahay DHEA caadi ah laakiin xiriirka labadaba ee 4th ayaa si isdaba-joog ah u bedelaya saameyntiisa.
4-DHEA waxay si fudud u beddeli kartaa 4-androstenediol, halkii ay 5-androstenediol, kor u qaadi lahaayeen awoodda anabolic ee ka badan 2x ee caadiga ah DHEA. (6-8, 11) 4-DHEA ayaa sidoo kale la rajeynayaa in ay leedahay heerka ugu sarreeya ee testosterone marka loo eego DHEA joogto ah. (6, 7) 4-DHEA waxay sidoo kale ka maqan tahay qalabka kuleylka gubanaya, taas oo bixisa korriin koronto oo sareeya oo saameyn xun leh. (4) Tani waxay awoodda kor u qaadday awoodda anabolic waxayna hoos u dhigtay ficil-celinta heer-kulka jirka oo horseedi doonta guulo la ogaan karo oo xoog leh, korriin caan ah, iyo miisaanka koritaanka.
4-DHEA waxay yeelan doontaa khafiifinta estrogen khafiif ah oo si fudud loogu dheelitirikaro steroids aan kaarjirin sida saliingar ama 1-DHEA. Guulada guud waxay la mid tahay "4-AD" oo laga mamnuucay 2004 Xakamaynta Xanuunka Xanuunka.
Sida kuwa kale ee DHEA, 4-DHEA waxay dabiici ahaan dhacdaa oo aan sun ahayn. (9) Dhibaatooyinka ay ka midka yihiin maqaarka oilyaha ama bacriminta oo hoos u dhaca ayaa loo tixgeliyaa mid fudud oo ku meel gaar ah. Dhibaatada ugu weyn ee la ogaan karo waxay noqoneysaa ciribtirka waxsoosaarka testosterone dabiiciga ah, kaasoo ka dhigaya PCT lagama maarmaan ka dib wareega. Guud ahaan 4-DHEA waa mashiinka dhismaha murqaha oo ammaan ah oo waxtar leh.
Halista kaliya ee 4-DHEA waa kharashka ugu sarreeya sababtoo ah qiyaasta sare ee loo baahan yahay in la arko saameynta dhismaha ee muhiimka ah.
10. Top 5 Prohormones Caan ah
4-DHEA (4-Andro) (oo loo yaqaan 4-Androsterone - 3b-hydroxy-androst-4-ene-17-One) ayaa ah horgal u ah 4-Androstenediol iyo 1-Androstenedione, oo ah hormuud u ah testosterone. Tani waxay ka dhigan tahay iyada oo loo marayo geeddi-socodka is-beddelka laba-tallaabo, 4-DHEA waxay u beddeli doontaa tijaabo ku jirta jirkaaga. Sida 1-Andro, kaniinadani waa mid aan methylated iyo sidaas ma aha sun ah beerka. Si kastaba ha noqotee, waxay aromatised in estrogen, sidaas darteed isticmaalka of aromatase inhibitor (AI) waa lagama maarmaan marka baaskiilkan this.
Qadar wanaagsan oo 4-DHEA ah ayaa noqon doona 300-750mgs maalintiiba iyadoo ku xiran khibrad shakhsiyeed oo leh daroogo kor u kiciya daawada (PEDs). Iyadoo laga hadlayo muddada wareegista lagu talinayo, isticmaaluhu wuxuu u adeegi doonaa toddobaadyada 6-8. Sida kor ku xusan, waa in aad isticmaashaa aromatase inhibitor si loo xakameeyo estrogen inta lagu guda jiro wareegga wareegga, iyo sidoo kale wax ka ilaaliya cadaadiska dhiigga heerarka caadiga ah. Kadib isticmaalka 4-Andro, mini-PCT ayaa loo baahan yahay. Tani waa inay ku jirtaa xinjirta 25mg maalintiiba, nolvadex at 20mg maalintii, iyo dhiirigeliyaha xoojinta tijaabada ah ee wanaagsan ee toddobaadka 4.
1-Andro (oo sidoo kale loo yaqaanno Androsterone - 3b-hydroxy-androst-1-ene-17-one) waa hormoon steroid ah oo daciif ah oo xitaa daciif ah oo leh qiyaasta 1 / 7th ee awoodda testosterone. Marka la soo saaro jirka, waxay u badashaa 1-Testosterone. Maadaama uusan dhismahaasi u badalin estrogen ama DHT, ma jiri karo wax saameyn ah oogada, sida gynecomastia ama haynta biyaha. Intaa waxaa dheer, 1-Andro waa mid aan methylated, sidaas darteed waa in yar ama aan lahayn sun beereed at dhan, samaynta beerka taageerada dheeraadka ah oo aan loo baahnayn. Si kastaba ha ahaatee, waxaa suurtagal ah in natiijada shaqada ee dhiigga ay u muujiso in yar yar ee unugyada beerka yar.
5-DHEA (magaca kiimikada: 5-DHEA - 3b-hydroxy-androst-5-ene-17-one) waa hormoon kaas oo si dabiici ah u sameeyey qanjirrada adrenal ee jirka bini'aadamka (gaar ahaan kelyaha, beerka, iyo tijaabooyinka ragga). Sida aad horeyba u ogtahay, DHEA waxay u adeegtaa sida hormoon u ah hormoonnada labka iyo dheddigga (iyo orrins iyo estrogens), waxayna u shaqeysaa adigoo isbedelaya Androstenedione, oo markaa loo beddelaa testosterone.
Epi-Andro (oo sidoo kale loo yaqaana: 3b-hydroxy-androstane-17-one) ayaa si dabiici ah looga soo saaraa jidhka 5a-reductase enzyme. Enzymekani waxa uu ku yar yahay dadka qaarkood, soosaarka dabiiciga ahi wuu ka duwanaan doonaa qof ahaan. Marka la qaato hadal, Epi-Andro waxay u soo noqotaa dihydrotestosterone (DHT), taas oo ah 5 wakhtiyo ah oo asrogenic ah sida testosterone, taasoo ka dhigaysa xaruntan wax ku ool ah ee kordhinta muruqa cufan ee sii kordhaya, murqaha muruqyada, awoodda, iyo gardarrada. Sida xaqiiqda dhabta ah, dadka isticmaala qaarkood ayaa xitaa soo maray inay korodhaan baruurta lumista iyada oo la isticmaalayo hormoonkan. Tan iyo markii uu dhismuhu yahay "qalalan" (oo aan lahayn isbedelka estrogen), waxaa caadi ahaan loo adeegsadaa marka la eegayo helitaanka xoogga iyo cufan aan laheyn ilo biyo ah.
Prohormone gaar ah waa mid gaar ah sababtoo ah xitaa weli suuqa weli. Magaciisa waxaa laga soo xigtay 1,4-DHEA (sidoo kale waxaa loo yaqaana: 1,4-DHEA - 3b-hydroxy-androsta-1,4-diene-17-one) waa cusub cusub ee DHEA ee hore ee Boldione Prohormone ee lagu mamnuucay 2012. Laba ka mid ah faa'iidooyinka la filayo ee badeecadani waa kicinta rabitaanka cuntada iyo hagaajinta wadajirka ah.
11. 4-DHEA (571-44-8) Sale
Dad badan ayaa raba in ay ogaadaan wareegga dhamaystiran iyo udubdhexaadkoodii ugu fiicnaa sababtoo ah waxaa jira wax badan oo khaldan oo ku saabsan wax kasta oo loo adeegsado iyo sababta ay tahay in loo qaado hab gaar ah.
Markaad rabto inaad kor u qaaddo xoogga iyo murqaha caafimaadka, hormoonnada 4-DHEA waa hal hab oo looga faa'iidaysto waxqabadka caafimaadka iyo murqaha. 4-DHEA waa tallaabo dhiiri-galin ah oo kor u qaadaya xajinta nitrogen, xoog, iyo mugga dhiigga muruqa. Ku darida 4-DHEA si aad u tababbarto xooggaaga iyo barnaamijka dhismaha jirka oo leh natiijooyin cajiib leh waxyeelo yar.
4-DHEA Nolosha nuska ah waa mid gaaban, waxaad ku dhejin kartaa wax kasta oo ka mid ah walxaha ama anabolic dabiiciga ah oo aan walwal gelin waxyeellooyinka aan loo baahnayn, laakiin waxa ugu fiican loola jeedaa 1-Andro iyo Epi-Andro (xayawaanka qalalan) maadaama ay kuwan tahay shaqo fiican oo lagu yareeyo ama laga ilaaliyo dheeraad ah joojinta biyaha.
Ma aha arrin adag in la helo 4-DHEA iibinta internetka, AASraw (www.aasraw.com) waxay bixisaa alaabooyinka taxanaha ah ee hufan, tayo wanaagsan, qiime tartan, adeegyo badbaado iyo degdeg ah.
Tags: 4-DHEA budada, iibso 4-DHEA budada
Desogestrel Powder For Sale: Faahfaahinta & Qiyaasta & Saameynta Kordhinta ugu ballaaran ee loogu talagalay budada Megestrol acetate